Xiriirka | Abaalmarinta Abaalmarinta, Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Relationships
Cilaaqaadka guusha leh waxay ku tiirsan yihiin dhisidda fahamka jacaylka iyo sida jacaylku u dhexgalo galmada.
Xagee buu luuqadu ka geli kartaa isku darka? Maxay tahay sababta ugu weyn ee halista halista ah?
"Waa maxay jacayl?" waa mid ka mid ah kuwa loogu raadinta badan yahay shuruudaha mashiinnada wax lagu raadiyo. ” Gunaanadkii Daraasadda Grant, oo ah cilmi baaris muddo 75 sano ah ka socotay Jaamacadda Harvard, ayaa ahayd in "farxaddu ay tahay jacayl". Daraasadda Grant waxay muujisay in xiriirka diiran uu yahay aasaaska ugu wanaagsan ee caafimaadka, maalka iyo nolosha dheer. Taas bedelkeeda, qabatinka, niyadjabka iyo neerfaha ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee soo food saaray xaaladdan aadka loo doonayo. Fahmitaanka halista ku xeeran isticmaalka suuxdinta internetka ayaa muhiim ah haddii aan dooneyno inaan iska ilaalino inaan ku dhex baddalno balwadda oo aan helno xiriir jacayl oo qanciya halkii.
Qaybtan qaybta "The Reward Foundation" waxay qeexaysaa siyaabo kala duwan oo dadku u dhexgalaan noloshooda oo dhan. Maxaa ka dhigaya xiriirka shaqo? Sidee jacayl kuugu dhici kartaa oo jacayl ku jiri kartaa? Maxay yihiin xayiraadaha kugu dhici kara?
Waxaan diirada saareynaa cilmiga cilaaqaadka guuleysta. Xaaladaha qaarkood waxaad u baahan tahay inaad eegto bayoolajiga aasaasiga ah iyo sayniska maskaxda si ay dhammaan macno u yeeshaan. Saamaynta Coolidge ayaa si gaar ah u xoog badan.
• Jacaylka, Galmada iyo Internetka
• Waa maxay jacayl?
• Jacaylka ah sida xaaraanta
• Lammaanaha Iskuduwaha
• Jacayl sida rabitaan jinsi ah
• Saameynta Coolidge
• Hoos u Dhigida Fursadaha Galmada
• Wasmo & Wasmo